Fanavakavaham-Bolonkoditra, Misy fa tsy Resahina ao amin’ny Vondrom-Piarahamonina Latinô ao Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2017 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, 日本語, Português, Español
Racismo. Sarin'ny mpisera Flickr Luis Romero. lisansa CC 2.0
Tamin'ny 24 jolay 2017 tao Los Angeles, California, nisy lehilahy hispanika iray nanadika Meksikana nivarotra amoron-dalana ka nanjera ny fitarihan'entany fivarotana sakafo. Tao amin'ny horonantsary voarakitra tao amin'ny findainy, nilaza ilay lasibatra fa nanjera ny fitondran'entany ity “mpanavakava-bolonkoditra be zesta” ity, ka namaly ilay io hoe , “Tsy mpanavakava-bolonkoditra aho ry ilay adala ity fa Arzantina a!”. Niteraka adihevitra bebe ihany ity horonantsary nahazo jery mihoatra ny 8,8 tapitrisa ity.
Be moa ny mihevitra fa amin'ny maha-vitsy an'isa azy dia tsy hahavita hifanavakavaka amin'izy samy izy na hanavakavaka izany ny Latinô ao Etazonia. Saingy misy mihitsy ny fihetsika mpanavakava-bolonkoditra eo amin'ny vondrom-piarahamonina Latinô, ary iray amin'ny lasibatra ny Afrikana-Amerikana.
Efa noresahana ity lohahevitra ity tany aloha tany, fa niverina indray noho ireo toe-javatra nahitana olona manana fiaviana hispanika nanao heloka bevava tamin'ny Afrikana-Amerikana, toy ny raharaha andrimasom-pokonolona George Zimmerman izay namono ilay tanora Trayvon Martin tamin'ny taona 2012, na ilay polisy Jeronimo Yanez izay nitifitra an'i Philando Castile teo am-pirihifana nandritra ny fiatoan'ny fifamoivoizana iray tamin'ny taona 2016. Samy noafahana madiodio ireo lehilahy roa ireo.
Nahatafiditra hispanika iray ihany koa ny toe-javatra niseho tao Charlottesville, Virginia: Michael Ramos, izay voamarika ho iray amin'ny nanafika an'i Deandre Harris, lehilahy Afrikana-Amerikana 20 taona. Rehefa fantatra tao amin'ny media sosialy i Ramos dia namoaka horonantsary nanasongadina fa tsy mpanavakava-kolonkoditra izy satria “Sady Latino no Pôrtôrikana.”
Amin'ny fahitana ireo toe-javatra ireo ary, ahoana izany ny fomba iresahan'ny Hispanika ny fanavakavaham-bolonkoditra? Ho an'i Mai-Elka Prado, mpiara-manorina ny Fetibe Afro-Latino ao New York, dia tsy zavatra mampiavaka ny vondrom-piarahamonina Latinô izany. “Ny olana dia tsy ny i Amerika Latina irery no manao izany, fa manerantany,” hoy ny nolazainy nandritra ny antsafa iray nifanaovana tamin'ny Global Voices.
Navoitran'i Prado fa tsy zava-baovao ny resaka fanavakavaham-bolonkoditra eo amin'ny Latinô sy ny olona manana fiaviana Afrikana. “Efa nihoatra ny 50 taona ny resaka nifanaovana momba izany, [ka] efa nanasongadina izany lohahevitra izany ny fetibe-ko. Ahatafidirana endrika politika, fanahy sy kolontsaina ity raharaha ity.”
Manaiky i Prado, izay manana fiaviana Panameana, fa “mbola misy ny fanavakavahana, saingy ho ahy any Amerika Latina, tsy misy fanajana ny famelana hiresaka amin'olona (mainty), ekena sy zaka eo amin'ny fiaraha-monina ny fampiasana teny sy fampitahana feno fanimbazimbana.”
Fikarohana iray vao haingana nataon'ny Pew Research Center no nahitana fa tokotokony ho 50 isanjaton'ny Hispanika no efa niharan'ny endrika fanavakavahana mifototra amin'ny volonkoditra na foko. Mandritra izany fotoana izany, 75 isanjaton'ny Afrikana-Amerikana no efa niharan'ny fanavakavahana na fiangarana.
Misy ireo sehatra ara-kolontsaina Latino tahaka ny Remezcla nandray anjara tamin'ny fampifandraisana ny vondrom-piarahamonina roa tonta. Nampirisihany, ohatra, ny firesahana faka afrikana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Latinô, ny fanasongadinana ny fahitana Afrô-Latinô, ny fanohanana ny fanovana politika ahafahana miady amin'ny fanavakavahana tafiditra lalina ao amin'ny fitsarana, ary ny fanairana amin'ny fisian'ny fanavakavahana latinô manoloana ireo olona manana fiaviana Afrikana.
Niresaka ny asany amin'ny fiarovana ny vondrom-piarahamonina Afrô-Peroviana ao Però sy ny olan'ny fanavakavahana i Mónica Carrillo, mpanorina ny LUNDU Foibe Fianarana sy Fampiroboroboana ireo Afrô-Peroviana ao Però, nandritra ny antsafa nifanaovany tamin'ny Global Voices. Vonona amin'ny teny espaniola eto ambany ny antsafa feno nifanaovana tamin'izany:
Nohazavain'i Carrillo ny anjara toerany tamin'ny fanesorana olona iray nolalaovina hametraka fomba fitsaratsaram-poana ireo Afro-Peroviana amin'ny sehom-pahitalavitra peroviana iray. Noresahany ihany koa ny voambolana “mainty” sy ny tokotany iresahana azy amin'ny fikarakarana (fanaovana) ireo taranaka Afrikana: “Tsy maintsy asehontsika ny haben'ny fitiavana amin'ny fampiasana voanteny ‘mainty’ sy ny haben'ny fanavakavahana ao aminy,” hoy i Carillo, “any amin'ny sehatra rehetra iantsoantsika ‘mainty’ amin'ny maha-tovona na tovana azy hifandrafy amin'ny fotsy, izay [heverina] ho ‘madio’.”
Manana fanontaniana lehibe mila fantarina ny vondrom-piarahamonina Latinô: Ahoana ny fomba hamahana ny fifandraisana mifanavaka eo amin'ny Hispanika sy ny Afrikana-Amerikana?